प्रकाशित मिति: 2015/09/20
नमराज गौली, प्रबन्ध निर्देशक, आउटफिटर नेपाल ट्रेक्स एण्ड एक्स्पीडिसन
टान निर्वाचनको पूवसन्ध्यामा देखिएका गतिविधिहरुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पर्यटन व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको टानको विषयमा उनिहरुको चासो रहनु स्वभाविक हो । यहि असोज १५ गते टानको नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनको लागि मिति तोकिएको छ । मिति निर्धारण भएसँगै पर्यटन क्षेत्रमा माहोल बढेको छ । विभिन्न पदका लागि आकाङ्क्षीहरुको संख्या ठूलै देखिएको पनि छ । निर्वाचन आउन अब जम्मा १२ दिनमात्र बाँकी छ, यस्तो अवस्थामा चुनावी सरगर्मी बढनुलाई अनौठो मान्नुहुँदैन ।
टानको आगामी कार्यसमितिमा जान तपाइँ पनि आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, होइन ?
हो । म वर्तमान कार्यसमितिमा सदस्यको रुपमा छु । र, आगामी कार्यसमितिमा कोषाध्यक्षमा जानका लागि म इच्छुक हो । म यसका लागि सक्षम छु भन्ने पनि ठान्छु ।
कोषाध्यक्षमा के कारणले तपाइँ सक्षम हुनुहुन्छ ?
विगत डेढ दशकदेखि म पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध रहिआएको छु । योग्यताका हिसावले मैले ग्रामिण विकास र समाजशाष्त्रमा मा स्नातकोत्तर सकेको छु । यसबाहेक विगतमा पर्यटक सेवा संघमा कोषाध्यक्ष चलाईसकेको र विगत आठ वर्षदेखि आउटफिटर नेपाल ट्रेक्स एण्ड एक्स्पीडिसन संचालन गर्दै आएको छु । यसका अतिरिक्त टान कार्यसमितिमा कोषाध्यक्षको भूमिका अपरिहार्य हुने र त्यहाँ पारदर्शी, सक्षम र स्वच्छ छविको मान्छे आवश्यक पर्ने हुँदा समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई योगदान मिल्ने हिसावले मैले आफूलाई प्रस्तुत गरेको हो ।
यसका लागि कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
मेरो खासै ठूलो तयारी केही पनि छैन् । बाहिर र भित्र सबै रुपमा टानलाई बुझेको हिसावमा मैले त्यस्तो तयारी केही गरेको छैन् । कोषाध्यक्षका लागि मेरो आकाङ्क्षा छ भन्नेमात्र हो ।
आगामी निर्वाचनका लागि व्यवसायीहरुविच विभिन्न कित्ताहरु पनि निर्माण भएका छन, तपाइँ कता हुनुहुन्छ ?
म कुनै पनि कित्तामा छैन् । मेरो परिचय भनेकै पर्यटन व्यवसायी हो । हाम्रो पार्टी भनेको पनि पर्यटन हो । यो–उ किक्ताभन्दा पनि म सबैको साझा उम्मेदवार बन्न चाहन्छु ।
साझा उम्मेदवार भएर अघि बढ्न कत्तिको सजिलो देख्नुहुन्छ ?
कुनै राजनीतिक दलभन्दा पनि व्यक्तिगत र व्यवसायीक हिसावले मेरो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । अर्को कुरा, पर्यटन क्षेत्रमा राजनीति हावी हुनुहुन्न, यसले संस्थाका गतिविधिहरुमा अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ । सक्षम व्यवसायी टानमा पुग्नुपर्छ । व्यक्तिगत आस्थाको कुरालाई राजनीतिकरण गर्नुहुँदैन । म आफू टानमा जाँदा राजनीतिकभन्दा समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा बढी केन्द्रित हुनेछु । त्यस्तै आफूले स्वयंलाई मूल्याङ्ककन गर्दा म आशावादी छु, आफू इच्छित पदमा पुग्नेमा । विभिन्न किक्ताकाविच समन्वय गर्नुपर्ने स्थिति आए त्यति नै बेला सोच्ने कुरा हो ।
टानको वर्तमान कार्यसमितिका बारेमा अनेकखाले विवादहरु आउने गरेका छन्, यसबारे टानभित्रै रहदाको तपाइँको अनुभव बताईदिनोस न ?
टानको वर्तमान कार्यसमितिले राम्रो काम गर्न सकेन, आर्थिक अनियमितता ग¥यो भन्ने कुरामा म सहमत हुन सक्दिन् । बिना प्रमाण आरोप लगाउनु गलत हो । टानको कार्यसमितिले गरेको कतिपय राम्रा कुराहरुको मूल्याङ्कन गर्न पनि पर्यटन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्छु ।
टानको आगामी नेतृत्व कसरी आउँछ भन्ने लाग्छ, तपाइँलाई ?
सहमती र सहकार्यबाटै अगाडी बढदा उक्तम हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । अब सहमती जुट्न नसकेको खण्डमा निर्वाचनको विकल्प छैन् । निर्वाचनमा गईसकेपछि जित/हारको कुरा त भैहाल्छ । तैपनि, जोजहाँ रहे पनि एकापसमा सहमती कायम गरेर अगाडी बढौँ भन्ने मेरो सन्देश हो, सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीहरुलाई । अहिले राष्ट्रिय रुपमा संविधान जारी भएको सकारात्मक सन्देश गएको बेला पर्यटन क्षेत्रले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरौँ, टानलाई पनि यसरी नै लैजाऔँ भन्ने मेरो आग्रह हो ।